‘भ्यालेन्टाइन डे’मा ‘गुप्तांग’ ठूलो बनाउन भन्दै स्टिलको रिंगभित्र छिराएपछि…
एक महिलासँग भेट्दा आफ्नो गु-प्तांग ठूलो होस् भन्ने चाहनाले एक युवकले आफ्नो गु-प्तांगलाई स्टिलको रिंगभित्र….
प्रेमको बहानामा भ्यालेन्टाइन डेलाई मात्रै बुझ्नु वा मनाइनु तर्कसंगत छैन । अहिले भ्यालेन्टाइन डे भन्दा पनि बिकृति भित्रिन थालेको छ । आफ्नो प्रेमिकालाई उपहार दिन भन्दै गु-प्ताङ् ठूलो बनाउन लागेका एक युवकलाई आपत परेको छ ।
भ्यालेन्टाइन डेका दिन एक महिलासँग भेट्दा आफ्नो गु-प्तांग ठूलो होस् भन्ने चाहनाले एक युवकले आफ्नो गु-प्तांगलाई स्टिलको रिंगभित्र छिराए ।
तर, यसो गर्दा उनको गोप्य-अंग २ दिनसम्म खतरनाक तरिकाले सुन्निएपछि उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउनुपरेको छ । द सनको रिपोर्टअनुसार थाइल्याण्डको राजधानी बैंककका यी युवाले डाक्टरहरुसँग आफूले आइतबार एक महिलालाई भेट्ने तय भएको र आफूले उनलाई प्रभावित पार्न यस्तो काम गरेको बताएका छन् ।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुस..
युवकका अनुसार उनले अंगमा रगतको दबाब बढाएर ठूलो र कडा बनाउन रिंग प्रयोग गर्न सकिने कुरा सुनेका थिए । त्यसैले उनले आफ्नो टुलबक्समा रहेको ३ सेन्टिमिटर फराकिलो रिंगमा तेल प्रयोग गरेर आफ्नो गु-प्तांग छि-राए । तर, भोलिपल्ट उनको गु-प्तांग निकै पी-डादायी तरिकाले सुन्नियो र उनले रिंग निकाल्न सकेनन् ।
शुक्रबार बिहानदेखि रिंग उनको अंगमा अड्किएको थियो र शनिबार अपरान्हसम्म उनले यसलाई निकाल्न नसकेपछि इमरजेन्सीमा फोन
शुक्रबार बिहानदेखि रिंग उनको अंगमा अड्किएको थियो र शनिबार अपरान्हसम्म उनले यसलाई निकाल्न नसकेपछि इमरजेन्सीमा फोन गरेका थिए ।
उनले उद्धारकर्ताहरुसँग भने ‘मेरो अं-ग नै काट्नुपर्छ कि भनेर म निकै डराइरहेको थिएँ । यो निकै सुन्निएको थियो र मलाई त फुट्छजस्तो लागेको थियो ।’ रिंग काटेर उनलाई बचाउन उद्धारकर्ताहरुलाई पूरा ६० मिनेट लागेको थियो ।
प्रकाशित मिति February 16, 2021
तपाईको राशि कुन ? आज चम्किदै छ यी ३ राशिको भाग्य
अनौठो ठाउँः जहाँ ६/७ वर्षको उमेरमै ‘सह वास’का लागि तालिम दिईन्छ !
फेसबुकमा कुरा भएपछि गेष्ट-हाउस पुर्यायो, कोठामा पुगेपछि थालि-हाल्यो…
‘डिम्पलवाली’ मोडल करिश्माका ब्युटी लुक्स, हेराैँ १५ तस्बिर
यी हुन् ‘बन्दुककी रानी, जो भन्छिन्- महिलाहरु बन्दुक बोक्नुस्
घुमघाममा ‘मस्त’ करिश्मा [फोटो फिचर]
आँचलले सारी लगाउँदा पेट ठुलो देखिएपछि…. (भिडियोसहित)
भाइरल भयो सनी लियोनीको रोमान्टिक हट भिडियो [भिडियोसहित]